Archive du 20200309
Prince Dr Ndriana Rabarioelina Andao hijoro fa potika ny firenena
Namoaka fanambarana momba ny raharaham-pirenena ny Prince Dr. Ndriana Rabarioelina, avy amin'ny Lahimatoan'Imerina,
Antoko Natiora Tsy ho afa-bela ny CENI sy ny minisiteran’ny atitany
“Showbiz” ny fitondram-panjakana amin’izao ity resaka olana niainga tamin’ny kara-panondro miisa 1.162.000 ity, hoy ny filohan’ny antoko politika Natiora, Mihari-Ni-Rencho.
Fampandrosoana ny firenena « Mila mifanome tanana ny lehilahy sy ny vehivavy »
Teny Ambatolampy Ambohimanarina ny depiote Todisoa Andriamampandry mivady sy ny vehivavy TIM Boriborintany faha-6 no nankalaza ny andron’ny 8 martsa 2020 omaly sady fifampiarahabana noho ny taona vaovao rahateo ihany koa io.
KAOMININA TALATAMATY Asa fa tsy kabary
Efa fotoanan’ny asa izao fa tsy kabary na ady lahy pôlitika intsony ho an’ny kaominina Talatamaty, tarihin’ny Ben’ny tanana Raharinoasy Dominique.
Gilbert Raharizatovo Tsy fanjakana ny fanjakana raha milavo lefona
Tsy fanjakana intsony ny fanjakana raha milavo lefona amin’izao mahazo azy izao.
« Relais Athletisme » 08 martsa Nisongadina ny klioban’ny T.A.F
Nisongadina indray ny kliobana Atletisma T.A.F tamin’ny fifaninanana Relais niisa 4 natao teny amin’ny kianja
Orange Pro-League andro faha-15 Miakatra tsimoramora ny ekipan’ny Cosfa
Lalao iray no tsy tontotosa tamin’ny fifaninanana baolina kitra Orange Pro-League Malagasy andro faha-15 notontosaina tamin’ny sabotsy 07
“Teny zato, kabary arivo, fa ny iray ihany no marina”, hoy ny oha-pitenenantsika izay.
Mpanakalo vola vahiny Velon-taraina ny amin’ny Coronavirus
Manintona ny olona kokoa ny fanakalozana vola vahiny eny amin’ny sehatra tsy ara-dalàna. Raha ny eto Antananarivo dia miroborobo ny fanakalozana eny amin’ireny olona mijorojoro tahaka ny eny Analakely sy Antsahavola ireny.
Mandrosoa Ivato Ny trano bodoin’olona, ny zanaka voaolana
Niharana toe-java-mampalahelo ny fianakaviana iray mipetraka eny Mandrosoa Ivato, ny faran’ny volana janoary 2020 teo.
ECPAT FRANCE Miaro sy manohana ireo ankizy niharan’ny herisetra
Ny 30 %-n’ireo ankizy 15 taona ka hatramin’ny 49 taona dia efa saika niharan’ny herisetra avokoa.
AMBOHIBAO ANTEHIROKA Vaindohan-draharaha ny ady amin’ny asan-jiolahy
Anisan’ny faritra tena mahamay amin’ny asan-jiolahy sy ny fanolanana amin’izao ny ao Ambohibao Antehiroka.